စကျတငျဘာ 12, 2018 – Healthy Life Journal
သင့်ဇနီးကို မကြာခဏ ဖက်ပွေ့ပေးပါ
၊ လရိပ်မေ ၊ ခင်ပွန်းသည်က သူ့ဇနီးကို ဖက်ပွေ့လိုက်တဲ့အခါ ဇနီးသည်ဟာ နွေးထွေးမှု၊ အကာအကွယ်ရရှိမှုနဲ့ လုံခြုံမှုတွေအ၀န်းအ၀ိုင်းထဲ ရောက်သွားသလို ခံစားရတယ်လို့ စိတ်ပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘာစကားမှမဆိုဘဲ အသံတိတ်နေပေမယ့် ဇနီးသည်ရဲ့ လက်အစုံက ငြိမ်းချမ်းသာယာမှုနဲ့ နွေးထွေးနေပါလိမ့်မယ်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက...
Glucosamine ဓာတ်ပါတဲ့ဆေးသောက်ပြီး မတည့်လို့
မေး. ကျွန်တော်က အသက် ၆၀ကျော် သက်ကြီးရွယ်အိုတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ထုတ် တစ်နေ့တစ်လုံးမှီဝဲရတဲ့ Gluco——- ဆေးကို မှီဝဲစားသုံးရင်း မျက်စိထဲမှာ အပူတွေထွက်သလိုဖြစ်ကာ မတည့်တဲ့လက္ခဏာပြသနေပါတယ်။ အဲဒီဆေးလုံးက မတည့်တာရှိပါသလား၊ ဆက်လက်မှီဝဲရမှာလား၊ အဲဒီဆေးလုံးကိုမှီဝဲရင် ဘာကောင်းကျိုးရမှာလဲ။ ဦးသန့်ဇင်၊ ကျောက်တံတား။ ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့်မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။...
ချွေးထွက်တိုင်း စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်ပြီး နေရခက် …
မေး. ကျွန်တော်ချွေးထွက်ရင်စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်ပြီး နေရခက်ပါတယ်။ ကျောပြင်တစ်ခုလုံး စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်နေတာပါ။ လူကြားထဲကုတ်လို့လည်းမရနဲ့ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရပါသလဲဆရာ။ သက်သာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်သင့်ပါသလဲ။ ထက်နိုင်၊ ထောက်ကြန့်။ ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့်မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကို သိဖို့လိုပါတယ်။ ဥပမာ- နေပူထဲထွက်ရလွန်းသူဆိုရင် နေပူမမိအောင် ထီးဆောင်းတာမျိုး၊ လုပ်ငန်းခွင်မှာအမှုန်အမွှားတွေနဲ့...
ပဋိသန္ဓေတားနည်းများ (၃) (Different Methods of Contraception)
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ (၁၁) Intrauterine Contraceptive Device (IUCD or IUD) သားအိမ်ထဲထည့်ပစ္စည်း သားအိမ်ထဲမှာ Plastic (ပလပ်စတစ်) ဒါမှမဟုတ် Copper (ကောပါး)ကြေးနီနဲ့လုပ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းငယ်လေးတခု ထည့်ထားပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ ကျားသုက်ပိုးဟာ မ-မျိုးဥနဲ့ ထိတွေ့မှုမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်။ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်း...
၀က်သက်ကာကွယ်ဆေးထိုးရင် အော်တစ်ဇင် ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ လုံးဝမမှန်ပါဘူး
ပါမောက္ခဦးစောဝင်း (ကလေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) အမျိုးသားကာကွယ်ဆေးထိုးကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဌ၊အရှေ့တောင် အာရှဒေသကြီး ကာကွယ်ဆေးထိုးဆိုင်ရာ အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်ဖြေကြားသည်။ မေး ၁ ။ ၀က်သက်ကာကွယ်ဆေးထိုးတာက အော်တစ် ဇင်ရောဂါနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိတယ်လို့ ဆရာမကြီးတစ်ဦး က ပြောပါတယ်ဆရာ။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်မကလေးကို MMR Vaccine ထိုးသင့်ပါသလား။...
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ အိမ်ထဲမှာ အ၀တ်လှန်းတာက ရေရှည်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ ဖြစ်ပွားစေတတ်ကြောင်း အိုင်ယာလန် ပန်းနာရင်ကျပ်အဖွဲ့အစည်းကဆိုပါတယ်။ အ၀တ်လှန်းတာကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်စိုစွတ်စေကာ မျိုးပွားစေတဲ့အစေ့တွေလွှင့်ထုတ်တဲ့ မှိုပေါက်ပွားစေပါတယ်။ မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ အဲဒီမျိုးစေ့တွေကြောင့် တချို့လူတွေမှာ ဓာတ်မတည့်ဝေဒနာ ဖြစ်ပွားစေတတ်ကြောင်း အဆိုပါအဖွဲ့မှ ဖီးနာကန်နီကပြောကြားပါတယ်။ ပုံမှန်လူတွေရဲ့ ခုခံအားစနစ်က...
၇လအရွယ် ကလေးငယ်ကို ဘယ်လို အစာတွေ ကျွေးရမလဲ
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၇လရောက်ပြီဆိုရင် ကလေးငယ်လေးတွေအတွက် ဖြည့်စွက်စာကို လေးကြိမ်ကနေ ငါးကြိမ် ကျွေးပါပြီ။ မနက်ရှစ်နာရီမှာ ဖြည့်စွက်စာကျွေးတယ် ဆိုရင် ၁၀ နာရီမှာ မနက်ခင်း သရေစာအနေနဲ့ ငှက်ပျောသီးကျွေးတာမျိုး စကျွေးလို့ရပါပြီ။ ၇လအရွယ်မှာ ငှက်ပျောသီး၊ ပန်းသီး၊ သင်္ဘောသီးစတဲ့...
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ ကျန်းမာအောင်မြင်တဲ့ ဘ၀ကိုရရှိစေဖို့ လွယ်ကူတဲ့နည်းတချို့ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ – တစ်နေ့တာအစီအစဉ်ကို လိုက်နာပါ အိပ်ရာထတဲ့အချိန်ကနေ အိပ်ရာဝင်တဲ့အချိန်အထိ တစ်နေ့တာအတွင်း ဘာအလုပ်တွေ ပြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာကို အစီအစဉ်ရေးဆွဲပြီးလုပ်ဆောင်ပါ။ အရာရာတိုင်းကို နီးကပ်မှလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကိုမထားပါနဲ့။ – မိတ်ဆွေစစ်ကို ရွေးချယ်ပေါင်းသင်းပါ...